जीवन महत्त्वपूर्ण रोजाइहरूले भरिएको हुन्छ। हामीले दुईटा कुराको बीचमा एउटालाई रोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तै, म मण्डली सभामा जाऊँ कि घुम्‍न जाऊँ? म गृहकार्य गरूँ कि खेल्न जाऊँ? म बुबा-आमालाई सहायता गरूँ कि साथीकहाँ जाऊँ? म बाइबल पढूँ कि पत्रिका पढूँ? म बल खेल्न जाऊँ कि प्रार्थना सभामा जाऊँ? म शनिबार साथीहरूसँग बनभोज जाऊँ कि चर्च सङ्गतिमा जाऊँ? म आफ्‍नो पढ्ने काम गरूँ कि साथीसँग गफ गरेर बसूँ?
तपाईंको अगाडि आइपर्ने यस्ता अरू थुप्रै रोजाइका बारेमा आफैं पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। सुरुका ख्रीष्टियनहरूले सीजर र ख्रीष्टको बीचमा गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण रोजाइ थियो। उनीहरूले आफू ख्रीष्टतर्फ निष्ठावान् बन्ने कि सीजरतर्फ निष्ठावान् बन्ने भन्ने कुराको बीचमा रोज्नुपर्थ्यो। यसको तात्पर्य उनीहरू ख्रीष्टतर्फ निष्ठावान् बन्नुपर्छ र सीजरतर्फ निष्ठाहीन बन्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन। प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सीजरतर्फ निष्ठाहीन बन्न र तिनलाई अनादर गर्न कहिल्यै पनि सिकाउनुभएन (मत्ती २२:२१ सित तुलना गर्नुहोस्)। तर दुईटामा कसलाई पहिलो स्थान दिने भन्ने कुराको बीचमा रोज्नुपर्दा, सीजरले सधैं दोस्रो स्थान लिनुपर्छ र ख्रीष्टले सधैं पहिलो स्थान पाउनुपर्छ (हेर्नुहोस् कलस्सी १:१८ “पहिलो स्थान”)।
“सीजर” को अर्थ
“सीजर” (Caesar) उपनाम अपनाउने प्रथम व्यक्ति विश्व-विख्यात जुलियस सीजर (JULIUS CAESAR) थिए जो एक रोमी सेनापति र राजनैतिक व्यक्ति थिए। ई.पू. ४४ मा उनको हत्या गरिएको थियो (बेथलेहेममा ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा करिब ४० वर्ष अगाडि)। “सीजर” को उपाधि उनलाई दिइएको एउटा आदरणीय र पृथक उपनाम थियो।
येशूको जन्म हुँदा रोमका शासक को थिए (लूका २:१ हेर्नुहोस्)? ______________________________ के तिनले पनि सीजर नामको प्रयोग गरे? ________ अगस्टस (Augustus) को समयदेखि हेड्रियन (Hadrian) सम्म (११७-१३८ ई.सं.) सबै रोमी शासकहरूका निम्ति “सीजर” शब्द एउटा नाम वा उपाधि नै भयो। मिश्रका राजालाई फा________ भनिए जस्तै (हेर्नुहोस् प्रस्थान १:८,११,२२) रोमका शासकहरू सीजर भनिए।
येशू ३० वर्षको हुनुहुँदा रोमका शासक को थिए (लूका ३:१ र ३:२३ सित तुलना गर्नुहोस्)? ________________________________________ के तिनी पनि सीजर नै थिए? __________ सिक्कामा कुँदिएको अनुहार वा आकृति तिबेरियासकै थियो। प्रभु येशू क्रूसमा मारिनुहुँदा र मरेकाहरूबाट बौरनुहुँदा मानिस नै रोमका शासक थिए।
रोमका शासक नेरो (Nero) बाइबलमा उल्लेखित अर्को सीजर हुन्। प्रेरित २५:११ मा पावलले उल्लेख गरेका व्यक्ति यिनै हुन्—“म _______________ उजुर चढाउँछु।”
ई. सं. ६४ मा नेरोको शासनकालमा रोममा आगलागी भयो। छ दिन, छ रात आगो दन्किरह्यो। अधिकांश शहर खरानीमा परिणत भयो। नेरो आफैंले शहरमा आगो लगाएका हुन् भन्ने हल्ला पनि चल्यो। फलस्वरूप रोमका बासिन्दाहरूमा आफ्नै शासकको विरोधमा भयङकर ठूलो घृणा पैदा भयो। नेरोले आगजनीको दोष अरु कसैमाथि लगाउनलाई एउटा “बलिको बाख्रा” भेट्टाउनुपरेको थियो। जनताको यस्तो घृणा आफूबाट हटाउनलाई नेरोले आगजनीको दोष ख्रीष्टियनहरूलाई लगायो। निश्चय पनि यो आरोप सत्य थिएन, तर परिणामस्वरूप ठूलो सङ्ख्यामा ख्रीष्टियनहरू गिरफ्तार गरिए र त्यसपछि ख्रीष्टियनहरूमाथि भयानक सतावट ओइरिन थाल्यो।
यस भीषण आगजनीको करिब ५० वर्षपछि एकजना ट्यासिटस् (Tacitus) नाम गरेका रोमी इतिहासकारले उक्त घटनाको बारेमा लेखेका थिए। तिनको भनाइ यस्तो छ:
“आफ्‍नो विरुद्धमा फैलिरहेका हल्लाहरूलाई दबाउन, नेरोले केही मानिसहरूलाई दोष्याए र शारीरिक यातना दिए जोहरू उनीहरूका खराब रीतिहरूका कारण घृणाका पात्र बन्न पुगेका थिए अर्थात् “ख्रीष्टियन” भनी चिनिने समूहका मानिसहरू। यस पन्थका संस्थापक ख्रीष्टलाई तिबेरियस सम्राटको शासनकालमा यहूदियाका राज्यपाल पोन्तियस पिलातसद्वारा फाँसी दिइएको थियो।
“आफूलाई ख्रीष्टियन भन्नेहरू सुरुमा गिरफ्तार गरिए। त्यसपछि उनीहरूबाट लिइएको सूचनाको आधारमा सयौंलाई दोषी ठहराइयो, आगजनीको आरोपमा भन्दा पनि उनीहरूको समाज-विपरित आस्थाको लागि। उनीहरूको मृत्युमा उनीहरूको खिल्ली उडाइयो। उनीहरूलाई जङ्गली पशुका छाला पहिराइयो, कुकुरहरूद्वारा च्यातचुत पारियो, क्रूसमा टँगाइयो र रात परेपछि आगोका राँकाझैं बलून् भनी जिउँदै जलाइयो। त्यो दृश्य हेर्न नेरोले आफ्‍नै बगैँचाहरू यसका लागि प्रायोग गरे र रङ्घशालामा पनि प्रदर्शन गरे। त्यसबेला तिनी आफै पनि भीडसित मिसिन्थे वा सारथीको भेषमा रथमा चढेर उभिन्थे। परिणामस्वरूप, यद्यपि तिनीहरू ख्रीष्टियन भएकाले दोषी थिए र मृत्युदण्डका योग्य थिए, मानिसहरूलाई तिनीहरूको निम्ति दुःख लाग्न थाल्यो। किनभने तिनीहरूको संहार जनहितको लागि नभई एउटा मान्छेको पागलपनको तृप्तिको लागि भइरहेको थियो भन्ने कुरा उनीहरूले महसुस गर्न थाले।”
(Tacitus Annals 15.44)
पत्रुस र पावल शहीद बनेका यिनै पागल र दुष्ट शासक नेरोको शासनकालमा नै हो। पत्रुसलाई उँधोमुन्टो पारेर क्रूसमा टाँगिएको थियो र पावलको शिर काटिएको थियो।
सीजरलाई म के दिऊँ?
मत्ती २२:१५-१८ मा केही यहूदीहरू धूर्त चाल मार्दै येशूलाई पासोमा पार्न उहाँकहाँ आए। जस्तो जवाफ दिए पनि उहाँलाई दोष्याउन सकिने प्रश्न गरे: “______________ कर तिर्नु उचित छ कि छैन?” (मत्ती २२:१७)।
येशूले मानौं यस्तो भन्नुभयो, “उचित छ, हामीले सीजरलाई कर तिर्नै पर्छ।” यो जवाफले कसलाई रिस उठाउनेथ्यो? स्मरण होस्, यहूदीहरू रोमी शासनमुनि बस्न पटक्कै चाहँदैनथे।
येशूले मानौं यस्तो भन्नुभयो, “उचित छैन, हामीले सीजरलाई कहिल्यै पनि कर तिर्नुहुँदैन। तिमीहरूले आफ्नो कर नतिर्नू!” येशूले यदि यसो भन्नुभएको भए, उहाँका शत्रुहरूले के गर्नेथिए? एउटा यहूदी शिक्षकले मानिसहरूलाई कर नतिर्नू भनी सिकाइरहेको कुरा सुनेर के रोमी अधिकारीहरू खुशी हुनेथिए? रोमी शासनको विरुद्ध विद्रोह उभाडेको भन्दै के प्रभुलाई दोष आउन सक्थ्यो?
प्रभु येशू उनीहरूको जालमा पर्नुभएन। तर बरू उहाँले मत्ती २२:२१ मा पाइने आफ्नो प्रख्यात जवाफ दिनुभयो। यी शब्दहरू सुनेपछि, उहाँका शत्रुहरूले के गरे (मत्ती २२:२२)? ________________________________________
सीजरका कुराहरू सीजरलाई देओ
हामीले आज यो आज्ञा कसरी पालन गर्न सक्छौं? हाम्रो राज्य-सरकार र हाम्रा अगुवाहरू प्रति हाम्रो के कस्तो जिम्मेवारी छ? हामीले उनीहरूलाई र उनीहरूका निम्ति के गर्नुपर्छ? के उनीहरू हाम्रो आदर र निष्ठा पाउने योग्यका छन् (१ पत्रुस २:१३, १४, १७)? के हामीले उनीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ (१ तिमोथी २:१-३)? के हामीले हाम्रा करहरू तिर्नुपर्छ? हामीमध्ये हरेक कस्तो किसिमको नागरिक हुनुपर्छ? जिम्मेवार नागरिकहरूको रूपमा, हामीले के-कस्ता कर्तव्यहरू निभाउनुपर्छ? तपाईंको देशले तपाईंलाई के दिएको छ? तपाईंले आफ्नो देशलाई के दिनुपर्छ? के प्रहरीमा काम गर्दै तपाईंको देशको सेवा गर्ने मानिसहरूप्रति र आफ्नो कर्तव्य निभाउँदै युद्धभूमिमा आफ्नो ज्यान दिनेहरूका निम्ति तपाईं धन्यवादी हुनुहुन्छ?
परमेश्वरका कुराहरू परमेश्वरलाई देओ
हामीले आज यो आज्ञा कसरी पालन गर्न सक्छौं? परमेश्वरतर्फ र परमेश्वरको वचन, बाइबलतर्फ हाम्रो के कस्तो जिम्मेवारी छ? के परमेश्वर हाम्रो सम्मान र निष्ठा पाउने योग्यका हुनुहुन्छ (१ पत्रुस २:१७)? के हामीले उहाँसित प्रार्थना गर्नुपर्छ? के हामीले उहाँका वचनहरू पढ्नुपर्छ? परमेश्वरको सामु म कस्तो किसिमको मानिस हुनुपर्छ? जिम्मेवार विश्वासीको रूपमा, मैले के-कस्ता कर्तव्यहरू निभाउनुपर्छ? तपाईंका आत्मिक जिम्मेवारीहरू के-कस्ता छन्? तपाईंको निम्ति परमेश्वरले के गर्नुभएको छ र उहाँले तपाईंलाई के दिनुभएको छ? तपाईंले परमेश्वरको निम्ति के गर्नुभएको छ र परमेश्वरलाई के दिनुभएको छ? के तपाईं एउटा असल ख्रीष्टिय सिपाही हुनुहुन्छ? के तपाईंले परमेश्वरको सेवा गर्दैहुनुहुन्छ? तपाईंको घरमा, स्कूलमा र अन्य जुनसुकै ठाउँहरूमा के तपाईंले आफ्नो विश्वासको असल लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ?
निम्न तालिकामा सीजर र ख्रीष्टको बीचमा सङ्क्षिप्त तुलना प्रस्तुत छ:
माथिको तालिकाको बारेमा विचार गर्दा, सीजरलाई ख्रीष्टसँग तुलना गर्न नै सकिन्न। एउटा मानिसले ख्रीष्टको सट्टामा सीजरलाई कसरी रोज्न सक्छ र? तरैपनि, मानिसहरूले यही नै गरिरहेका छन्। उनीहरूले ख्रीष्टलाई इन्कार गरेका छन् र उहाँको सट्टामा सीजरलाई आदर गरेका छन्।
यूहन्ना १९:१२ लाई विचार गर्नुहोस्। पिलातस रोमी शासक थिए। तिनी रोमी सम्राट (सीजर) प्रति निष्ठावान हुनुपर्थ्यो। सीजरले आफैंलाई सर्वोच्च शासकको रूपमा हेर्ने गर्थे। उनले आफैंलाई राजाहरूका राजाको रूपमा हेर्ने गर्थे। यूहन्ना १९:१२ मा आफैंलाई राजा ठहराउने जोसुकैको विरोधमा सीजर हुनेछन् भनेर यहूदीहरूले पिलातसलाई सम्झना गराउँदैथिए। सीजर कुनै प्रतिस्पर्धी चाहँदैनथिए।
त्यसपछि यूहन्ना १९:१५ मा पिलातसले यहूदीहरूलाई एउटा कुरा रोज्न गर्न बाध्य गराए। के तिमीहरूका राजालाई म क्रूसमा टाँगूँ? यहूदी अगुवाहरूले के जवाफ दिए? ‌__________________________________________
सीजरलाई ख्रीष्टसँग तुलना गरिएको तालिकालाई सम्झना गर्नुहोस्। यहूदीहरूले दाहिने पट्टि हुनुभएकोलाई छोडेर देब्रे पट्टि भएकोलाई रोजे! कस्तो मूर्ख रोजाइ! यहूदीहरूले सीजरलाई घृणा गर्दथे र रोमीहरूले आफूमाथि शासन गरेको कुरालाई घृणा गर्दथे, तरैपनि ख्रीष्ट प्रतिको तिनीहरूको घृणाले सीजरप्रतिको तिनीहरूको घृणालाई पनि उछिन्यो। _____________ बाहेक हाम्रो अरू राजा नै छैन। (एउटा निष्ठावान ख्रीष्टियनले के भन्नुपर्छ? ______________ बाहेक मेरो अरू राजा नै छैन।)
रोमी सम्राज्यका शासकहरू राजनीतिक अगुवा मात्र नभएर धार्मिक अगुवा पनि हुन्थे। शासकलाई पोन्टिफेक्स् म्याक्सिमस् (PONTIFEX MAXIMUS), अर्थात् प्रमुख पूजाहारी (मूल पूजाहारी, अग्र पङ्क्तिको पूजाहारी) भनेर पनि चिनिन्थ्यो। तिनको ओहोदा यति उच्च थियो कि तिनी ईश्वरीय उपासनाको पात्र पनि बनेका थिए।
ओहोदा र शक्ति मानिसको काँधमाथि आएपछि निजले आफू नै सबै भन्दा महान् हुँ भन्ने सोच्न पुग्नु अति सजिलो हुन्छ। आफ्नो सामु हरेक पल्ट मानिसहरू निहुरेर सेवा पाउने बानी भएका राजाहरू र सम्राटहरूमा यो झन् बढी सजिलो हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो उपासना गरिनुपर्छ भनी सोच्न थाल्छन्। के नबूकद्नेस्सर (बेबिलोनका महान् शासक) यही जालमा परेका थिए (दानियल ३ अध्याय)? __________ उनलाई परमेश्वरले के-कस्ता पाठहरू सिकाउनुभयो (दानियल ४:३१-३७)?
रोमी सरकारले विभिन्न धर्महरूलाई अनुमति दिएको थियो। उनीहरूले मानिसहरूलाई उनीहरूका विभिन्न मूर्तीहरूको पूजा गर्न र उनीहरूका विभिन्न धार्मिक रीतिहरू मान्न अनुमति दिन्थ्यो। रोमीहरूले यहूदी मानिसहरूलाई उनीहरूको धर्म मान्न, पशु बलिदान गर्न र मन्दिरमा उपासना गर्न समेत अनुमति दिन्थे (कम्तीमा पनि ई. सं. ७० मा यरूशलेमको शहर नाश नभएसम्म; त्यसपछि रोमीहरूद्वारा मन्दिर नष्ट गरियो)।
रोमीहरूले अरू धर्महरूलाई सहे तापनि र तिनीहरुमाथि आस्था राख्ने अनुमति दिए तापनि, मानिसहरूले कम्तीमा पनि वर्षको एक पटक सीजरको महानतालाई स्वीकार गरेको उनीहरू चाहन्थे। मानिसहरूले सार्वजनिक रूपमा सीजरलाई आफ्नो पूर्ण राजनिष्ठा दिएको र तिनको महानतालाई मानिलिएको चाहन्थे। उदाहरणको निम्ति, सन् २५० ई.सं. मा डेसियस (Decius) ले एउटा नियम लागु गरे जसमा मानिसहरूले कम्तिमा पनि वर्षको एकपटक रोमीहरूको वेदीमा देवताहरूलाई बलिदान चढाउनुपर्थ्यो र त्यसै वखत शासकको उत्कृष्टता र महानतालाई पनि स्वीकार्नुपर्थ्यो। त्यस्तो बलिदानहरू चढाउनेलाई विशेष प्रमाण-पत्र दिइन्थ्यो। त्यस्ता प्रमाण-पत्रहरू नपाउने वा नलिने व्यक्तिहरूलाई अकसर सताइन्थ्यो।
सुरुका ख्रीष्टियनहरूले शासकलाई र तिनको मूर्तिलाई ईश्वरीय आदर चढाउन इन्कार गरे। ख्रीष्टियनहरूले महान् शासकको वेदीमा एक चिमटी धूपौरो चढाउन पनि इन्कार गरे। यस्ता समयहरू आउँछन् जब परमेश्वरका जनहरू मानिसहरूको सामु झुक्न इन्कार गर्नुपर्छ। यस्ता समयहरू हुन्छन् जब परमेश्वरका जनहरूले उहाँको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति राजाको आज्ञा पालन गर्नुहुँदैन। यस्ता समयहरूको बारेमा दानियल ३ र ६ अध्यायमा राम्रा उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
सुरुका ख्रीष्टियन समूहहरूको बीचमा रोमी अधिकारीहरू आएर यसो भनेको कल्पना गर्नुहोस्, “हाम्रो हुकुमसित सहमत हुनोस् नत्र तिमीहरू साँच्चै समस्यामा पर्नेछौ। तिमीहरूको मुखले सीजर नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकारेको मात्र हामीले चाहेका हौं। सीजर नै सार्वभौम हुनुहुन्छ भनेर मानिदेऊ मात्र। सीजर नै परमप्रधान हुनुहुन्छ र यदि तिमीहरूले यति कुरा मानिलियौ भने हामी तिमीहरूलाई एउटा प्रमाण-पत्र दिनेछौं। हामी तिमीहरूलाई आफ्नै ईश्वरहरूको उपासना गर्न र तिमीहरूको आफ्नै धार्मिक रीतिहरू पूरा गर्न दिनेछौं, तर तिमीहरूले कम्तीमा पनि वर्षको एक पटकचाहिँ “सीजर नै परमप्रधान हुनुहुन्छ! सीजर नै प्रभु हुनुहुन्छ!” भनेर आफ्नो वफादारीता र भक्ति देखाएको हामी चाहन्छौं।”
तपाईं यी सुरुका ख्रीष्टियनहरूमध्येमा हुनुभएको भए, तपाईंले के गर्नुहुन्थ्यो? किन? यसो गरिएको खण्डमा के मूल्य चुकाउनुपर्थ्यो होला? यसो नगर्नुको मूल्यचाहिँ के हुनेथियो होला?
ख्रीष्टप्रतिको वफादारिता र सीजरप्रतिको वफादारिताको बीचमा रोज्नुपर्दा, सीजर दोस्रो स्थान लिन बाध्य हुन्थ्यो। हामीले ख्रीष्टको पहिलो स्थानलाई अरू कुनै पनि मानिसलाई खोस्न दिनुहुँदैन। मानौं इस्लामी आतङ्ककारीहरूले बल-जफती गरेर हाम्रो देशलाई आफ्नो हातमा लिएछन्। मानौं उनीहरूले सबैजनालाई आफ्नो मुखले यस्तो वाक्य स्वीकार गर्न बाध्य गराएछन्, “अल्लाह नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ र मोहम्मद नै उहाँको अगमवक्ता हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट मेरो परमेश्वर हुनुहुन्न। म हरेक मानिस र अन्य हरेक वस्तुभन्दा बढी अल्लाह प्रति वफादार हुनुपर्छ!” यसो भन्न इन्कार गर्नेहरू दण्डित गरिनेछन् र कसैकसैलाई मारिनेछ। तपाईं के गर्नुहुन्थ्यो?
के तपाईंको विचारमा आज हाम्रो संसारमा यस्ता ठाउँहरू होलान् जहाँ विश्वासीहरू मानिसहरूको सामु घुँडा टेक्न र ख्रीष्टलाई इन्कार गर्न नमानेको कारणले सताइन्छन् र मारिन्छन्? हरेक ख्रीष्टियनले त्यहाँ केवल _____________ प्रभु हुनुहुन्छ भनेर मानिलिन्छ (एफेसी ४:५)। यो साँचो हो, धेरै मानिसहरूले आफैंलाई प्रभु भन्छन् र आफैंलाई माथि उचाल्छन् (१ कोरिन्थी ८:५), तर त्यहाँ प्रभु भनेर बोलाइने योग्यको केवल एकजना मानिस मात्र हुनुहुन्छ! मानिसहरूले यो व्यक्तिगत रोजाइ गर्नैपर्छ: के म उहाँलाई मेरो प्रभु हुन दिऊँ कि नदिऊँ?
येशू ख्रीष्टको प्रभुत्व
मानिसहरूले सीजरलाई प्रभु माने तापनि, सीजर प्रभु होइनन्। यशैया २६:१३ मा हामी पढ्छौं, “हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, ____________बाहेक अरू __________ले हामीमाथि अधिकार जमाएका छन्।” तपाईंबाहेक अरू प्रभुहरू। मानिसको समस्या यही हो। उसले अरू प्रभुहरूलाई परमप्रभुको स्थान जमाउन दिन्छ। उसले ख्रीष्टको ठाउँलाई सीजरहरूलाई सुम्पन्छ।
के तपाईंको जीवनमा ख्रीष्टको स्थान लिइरहेका कुनै “प्रभुहरू” छन्? के तपाईंले उपासना गरिरहनुभएको र दण्डवत् गरिरहनुभएको त्यहाँ कुनै “सीजरहरू” छन्?
धेरै मानिसहरूको हृदयभित्र ”म” नाम गरेको सीजर हुन्छ। यो म भनिनेलाई उच्च पारिन्छ, उचालिन्छ र पहिलो स्थान दिइन्छ। ”म”लाई प्रभु बनाइन्छ! मानिसले “म” लाई आदर गर्छ, “म” को सेवा गर्छ र “म” को निम्ति जिउँदछ। ख्रीष्टले ओंठको सेवा त पाउनुहोला तर वास्तविक सेवाचाहिँ ”म”ले पाउँदछ। के तपाईंको जीवनमा यही समस्या छ? यसको बारेमा के गर्न सकिन्छ?
विश्वासीहरू भएको हुनाले हामीलाई येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी हाम्रो मु______ले स्वीकार गर्नुपर्छ (रोमी १०:९)। के तपाईंले यसो गर्नुभएको छ? येशू ख्रीष्ट नै तपाईंको प्रभु हुनुहुन्छ भनेर के अरूहरूले जान्दछन्? उनीहरूले यो कसरी जान्दछन्? तपाईंले यो कसरी देखाउनुहुन्छ? के तपाईंका स्कूलका साथीहरूले जान्दछन्? एउटा व्यक्तिले इमानदारीतामा र सत्यतामा ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्न सक्नको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभुको रूपमा प्राप्त गर्नु भनेको साँच्चै के हो भनी जान्नलाई निजलाई सहायता गर्ने को हुनुहुन्छ (१ कोरिन्थी १२:३)? ____________________________ के सुरुका ख्रीष्टियनहरूले ख्रीष्टलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गरे (प्रेरित २:३६; १०:३६; १७:२४)?
के ख्रीष्ट साँच्चै प्रभु हुनुहुन्छ? के उहाँ साँच्चै हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने, यसको अर्थ के हो? के मेरो प्रभुले मबाट केही कुराको माग गर्नुहुन्छ? हरेक विश्वासीले सोच्नुपर्ने र सम्झना गर्नुपर्ने केही कुराहरू यस प्रकार छन्:
१. प्रभुत्वले आज्ञाकारिताको माग गर्दछ।
उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ भनी हामी दाबी गर्छौं भने हामीले के गर्नुपर्छ (लूका ६:४६)? _______________________________________ पावलले सुरुमा मुक्ति पाउँदा आफ्नो प्रभुप्रति पावलको अवधारणा कस्तो थियो (प्रेरित ९:६)? _________________________________________ ख्रीष्टलाई प्रभु भनी सम्बोधन् गर्नु र त्यसपछि उहाँले भन्नुभएका कुराहरूलाई बेवास्ता गर्नु र अवज्ञा गर्नु किन नमिल्ने कुरा हो?
२. प्रभुत्वले सेवाको माग गर्दछ।
हामीले कसको सेवा गर्दछौं (रोमी १२:११)? _______________________ हाम्रो सेवाको बारेमा कलस्सी ३:२३-२४ ले के भन्दछ?__________________________________
हामीले हरदिन कसलाई खुशी पार्न खोज्नुपर्छ (एफेसी ५:१०, “मनपर्ने” शब्दको अर्थ हो “अति प्रसन्न तुल्याउने”)? __________________ सीजरका मानिसहरूमध्ये कसैले उसको सेवा गर्न इन्कार गर्यो भने उसले के गर्नेथियो होला?
३. प्रभुत्वले सङ्गतिको माग गर्दछ।
हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई केको निम्ति बोलाउनुभएको हो (१ कोरिन्थी १:९)? __________________________________________
परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यहाँ हाम्रा ______________ भनिएको छ। औसत रोमी नागरिकले महान् सम्राट सीजरसँग सङ्गति गर्न पाउँदैनथियो। सामान्य मानिस सीजरको सामु पुग्न सक्दैन थियो। उसको नजिक जान र ऊसँग कुरा गर्न त झनै गाह्रो हुन्थ्यो। आफ्नो प्रभुसँग विश्वासीको सम्बन्ध यो भन्दा कत्तिको भिन्न छ?
४. प्रभुत्वले प्रेमको माग गर्दछ।
प्रभुलाई प्रेम नगर्नेहरूको बारेमा पावलले के भने (१ कोरिन्थी १६:२२)? __________________________________________ अधिकांश रोमीहरूले प्रेमको कारणले नभई बाध्यताको कारणले सीजरको सेवा गर्दथे (किनभने यो उनीहरूको चाहना थिएन, तर उनीहरूको बाध्यता थियो)। तपाईंले चाहिँ ख्रीष्टको सेवा प्रेमले गर्नुहुन्छ कि बाध्यताले? मण्डली आउनु तपाईंको चाहना हो कि बाध्यता? तपाईंलाई बाइबल पढ भनेर भन्ने त्यहाँ कोही नभएको भए के तपाईं आफैं बाइबल पढ्नुहुन्थ्यो होला?
एकदिन सबै मानिसहरूले के गर्नेछन् (फिलिप्पी २:९-११)? _________________________________________
के बिगतका सबै सीजरहरू एकदिन ख्रीष्टको सामु उभिएर आ-आफ्ना घुँडा टेक्नेछन्? के उनीहरूले येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नेछन्? के तपाईंले यसो गर्नुभयो? कि त प्रेमले नै आज यसो गर्नुहोस् नत्र ता तपाईंले भविष्यमा बाध्यताले यसो गर्नुपर्नेछ!
"अनि तिमीहरू किन मलाई ‘हे प्रभु, हे प्रभु’ भन्दछौ,
र मैले भनेका कुराहरूचाहिँ पालन गर्दैनौ?"
सीजर होइन, तर ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ!
के यो सत्यताले तपाईंको जीवनलाई बदलेको छ?
के तपाईं उहाँको प्रभुत्वप्रति समर्पित हुनुहुन्छ,
र उहाँलाई नै तपाईंको जीवनमा उहाँको मार्ग र स्वामित्व पूरा गर्न दिरहनुभएको छ?